आज ‘फिफा बेस्ट अवार्ड’ घोषणा हुँदै : कसले मार्ला बाजी ?
एजेन्सी / वर्ष २०१९ का लागि ‘फिफा बेस्ट अवार्ड’ आज घोषणा हुँदैछ । इटालीको मिलानमा फिफाले एक औपचारिक कार्यक्रम गरेर आज सो अवार्ड घोषणा गर्न लागेको हो । आज वर्षको उत्कृष्ट पुरुष खेलाडीसँगै उत्कृष्ट महिला खेलाडी, उत्कृष्ट प्रशिक्षकदेखि विभिन्न विधाका उत्कृष्ट अवार्ड घोषणा हुनेछ ।
त्यसैगरी, आज फिफा पुस्कास अवार्ड पनि घोषण हुनेछ । यो अवार्ड वर्षभरिको उत्कृष्ट गोलकर्तालाई दिइने अवार्ड हो । यस अवार्डका लागि स्पेनिस बार्सिलोनाका लिओनल मेस्सीलाई प्रमुख दाबेदार मानिएको छ । त्यसैगरी, उत्कृष्ट प्रशिक्षकमा इंग्लिस क्लब लिभरपुलका जोगर्ने क्लोप, म्यानचेस्टर सिटीका पेप ग्वार्डिओला र टोटनह्यामका माउरिसियो पोचेटिनो अन्तिम सूचीमा परेका छन् ।
वर्ष खेलाडीमा भान डाइक कि मेस्सी ?
यस वर्ष फिफा वर्ष खेलाडी को बन्ला बन्ने चासो सर्वत्र छ । यसपटक यस अवार्डका लागि गत वर्ष लिभरपुललाई च्याम्पियन्स लिग जिताएका डच डिफेन्डर भर्जिल भान डाइकलाई प्रमुख दाबेदार मानिएको छ । उनीसँगै बार्सिलोनाका मेस्सी र इटालियन युभेन्टसका क्रिस्टियानो रोनाल्डोसमेत प्रतिस्पर्धामा छन् ।
यसअघि भान डाइकले मेस्सीलाई पछि पार्दै युरोपको सर्वश्रेष्ठ खेलाडीको अवार्ड जितिसकेका छन् । सो अवार्ड पनि जितेका फिफा वर्ष खेलाडी पनि भान डाइकले जित्ने सम्भावना प्रबल छ ।
तर, गत वर्ष बार्सिलोनालाई ला लिगाको उपाधि जिताउन तथा च्याम्पियन्स लिगको सेमिफाइनलसम्म लैजानेक्रममा ५० खेलबाट ५१ गोल गर्दै १९ असिस्ट गरेका मेस्सीले भान डाइकलाई कडा टक्कर दिनेछन् । गत सिजन च्याम्पियन्स लिगमा बार्सिलोना लिभरपुलसँग हारेर सेमिफाइनलबाट आउट भएपछि साथै ब्राजिलमा भएको कोपा अमेरिका फुटबलमा मेस्सीले कमजोर प्रदर्शन गरेपछि व्यक्तिगत ठूला अवार्डमा उनको दाबेदारी कमजोर बनेको थियो ।